မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ အလှဆုံးအချိန် - Tameelay
မိန်းမတစ်ယောက်ဘဝမှာ ဂုဏ်ယူဖ်ို့အကောင်းဆုံးအချိန်က ကိုယ်လိုအပ်တဲ့အရာတွေကို ကိုယ်ပိုင်ဝင်ငွေနဲ့ ဝယ်နိုင်တဲ့အချိန်
မိန်းမတစ်ယောက်ဘဝမှာ အပျော်ရွှင်ရဆုးံအချိန်က နာကျင်ခြင်းတွေကိုမေ့ပြီးအလှပဆုးံပြုံးပြနိုင်တဲ့အချိန်
မိန်းမတစ်ယောက်ဘဝမှာ အပြီးပြည့်စုံအချိန်က ကိုယ့်ပတ်ဝန်ကျင်ကို နိုင်သ​လောက်အားနဲ့ ဖြည့်စွက်ပေးနိုင်တဲ့အချိန်
မိန်းမတစ်ယောက်ဘဝမှာမျက်ရည်တွေရှိမယ် နာကျင်ခြင်းတွေ၊ထိုးနှက်မှုတွေသွေးတိုးစမ်းတာတွေ မျိုးစုံကြုံရမယ်
ဒါပေမဲ့ မိန်းမဆိုတဲ့အမျိုးကဖိအားတွေနဲ့ ပိုလှပလာတဲ့ စိန်ပွင့်လေးနဲ့တူတယ်
တကယ်ပါ…မိန်းမတစ်ယောက်အလှဆုံးအချိန်ဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစချစ်တဲ့အချိန်မှာ ဖြစ်ပေါ်တယ်လေ . . .
သင်ကော… အလှဆုံးဖြစ်ဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား
credit >>Original writer
မိနျးမတဈယောကျဘဝမှာ ဂုဏျယူဖျို့အကောငျးဆုံးအခြိနျက ကိုယျလိုအပျတဲ့အရာတှကေို ကိုယျပိုငျဝငျငှနေဲ့ ဝယျနိုငျတဲ့အခြိနျ
မိနျးမတဈယောကျဘဝမှာ အပြျောရှငျရဆုးံအခြိနျက နာကငျြခွငျးတှကေိုမပွေီ့းအလှပဆုးံပွုံးပွနိုငျတဲ့အခြိနျ
မိနျးမတဈယောကျဘဝမှာ အပွီးပွညျ့စုံအခြိနျက ကိုယျ့ပတျဝနျကငျြကို နိုငျသ​လောကျအားနဲ့ ဖွညျ့စှကျပေးနိုငျတဲ့အခြိနျ
မိနျးမတဈယောကျဘဝမှာမကျြရညျတှရှေိမယျ နာကငျြခွငျးတှေ၊ထိုးနှကျမှုတှသှေေးတိုးစမျးတာတှေ မြိုးစုံကွုံရမယျ
ဒါပမေဲ့ မိနျးမဆိုတဲ့အမြိုးကဖိအားတှနေဲ့ ပိုလှပလာတဲ့ စိနျပှငျ့လေးနဲ့တူတယျ
တကယျပါ…မိနျးမတဈယောကျအလှဆုံးအခြိနျဆိုတာကိုယျ့ကိုယျကို ယုံကွညျမှုအပွညျ့နဲ့ ကိုယျ့ကိုယျကိုစခဈြတဲ့အခြိနျမှာ ဖွဈပျေါတယျလေ . . .
သငျကော… အလှဆုံးဖွဈဖို့ အဆငျသငျ့ဖွဈပွီလား
အကုသိုလ်အကျိုးပေးချိန် ၅ ချိန် ရှိတယ်တဲ့…. အဲ့ဒါတွေက
အကုသိုလ်အကျိုးပေးချိန် ၅ ချိန် ခေတ်ဆိုး ခေတ်ပျက် ကြုံတွေ့ ချိန် အချိန်မဲ့ အခါမဲ့ သွားလာချိန် မတော်တဲ့အခါ နေမိချိန် ( ရန်ဖြစ်သောအခါ အနားမှာရှိတာမျိုးစသောအခြေအနေမျိုးကိုခေါ်သည်) ပြောမှား ဆိုမှား လုပ်မိချိန် မိတ်ကောင်း ဆွေကောင်း ကင်းမဲ့ချိန် မှတ်ချက် အခု အဲဒီအချိန်ကို ရောက်နေပါပြီ …